Redesigning E-mail: Atụmatụ 6 Dị Mkpa Ichegharị-Echiche | Martech Zone
Redesigning E-mail: Atụmatụ 6 Dị Mkpa Ichegharị
Tọzdee, Ọktoba 8, 2015 Tọzdee, Ọktoba 8, 2015 Richard Smullen
Dabere n’onye ị jụrụ, e-mail anọwo ihe dị n’agbata afọ 30 na 40. Uru ya doro anya, yana ngwa gbasara gafee ma mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndụ ọkachamara. Otú ọ dị, ihe pụtara ìhè bụ etu teknụzụ e-mail si bụrụ ihe mgbe ochie. N'ọtụtụ ụzọ, a na-emezigharị e-mail ka ọ dịrị mkpa maka mkpa ndị na-eto eto taa.
Ma ugboro ole ka ị ga-enwetụ ihe tupu gị ekweta na ma eleghị anya oge ya agafeela? Mgbe ịmalitere ọnyà nke ozi-e na ịchọpụta ebe emelitere, ị ga-amata etu ‘e-mail 2.0’ siri dị iche ma ọ bụrụ na ewuru ya wee bido taa. Kedu ihe ndị a ga-etinye ma ọ bụ ka mma? Gịnịkwa ka a ga-ahapụ? Ihe okike ohuru o gha enyere onwe ya na ngwa ndi ozo?
Ọ bụrụ na anyị ga-emegharị ozi ịntanetị taa, lee ntọala isii ga-abụ ọkwa ikpo okwu ọhụụ. Amaghị m banyere gị, mana ọ bụrụ na m nwere ike iji sistemụ a, m ga-abụ otu onye nwere obi ụtọ ma rụọ ọrụ nke ọma per
Enweghị adreesị email ọzọ
Igbe igbe anyị dịkarịsịrị. N'ezie, dị ka Radicati Group si kwuo, 84% nke e-mail natara taa bụ spam. Maka na nke a dị mfe: adreesị ozi-e na-emeghe. Ihe niile onye ọ bụla chọrọ bụ adreesị ozi-e gị na 'voila' - ha nọ na igbe mbata gị. Na E-mail 2.0, a ga-enwe sistemụ ikike nke nwere otu njirimara. Ihe njirimara a ga-anọgide na nzuzo dị ka nọmba ekwentị.
Igbe mbata ga-efu
Ozugbo anyị nwetara 'njirimara' na usoro ikike maka ndị ọrụ, anyị nwere ike tufuo igbe mbata. Yep, igbe mbata. E-mail 2.0 ga - enyere ndị azụmaahịa na ndị ahịa aka ma ọ bụrụ na mkparịta ụka ọ bụla ma ọ bụ ozi ozi ọ bụla gafere ụdị ịwụ 'jikọtara', aka igbe. Uzo di n’etiti ahia na ndi otu ya gha abu nnabata nke oma.
Ọnọdụ oghere nke adreesị ozi-e na ọtụtụ adịgboroja pụtakwara na ọ bụrụ na nje, ịchụso phishing, na aghụghọ adịla anyị mma. Na enweghị nguzosi ike n'ezi ihe, amachibidoro ihe ọ bụla karịrị 'ebubo ebubo'. Yabụ, site na e-mail 2.0, anyị ga-achọ inwe ike ịkwụ ụgwọ, bịanye aka na akwụkwọ nzuzo ma nyefee ihe ọgụgụ isi. Nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na emeghere ọwa echekwara, ezoro ezo nke ọma n'etiti onye na-ezipụ na onye nnata wee si otú a hụ na anaghị ajụ.
Real oge nkwurịta okwu na ngosipụta
Mgbe izipu ozi email, gịnị na-eme ya? A na-ekpofu ya, nke spam na-amata, gụọ, leghaara anya? Eziokwu bu; imaghi. Site na e-mail 2.0, ịza ajụjụ na ịkọ akụkọ ga-adị n'ihu na etiti. Dị nnọọ ka otu esi ede ozi ederede, ozi-e anyị ga-eme n'ọdịnihu ga-abụ nke ndị ozi na-akwado ma na-agba ume ezigbo oge, mmekọrịta chiri anya. Na-arụ ọrụ mgbe niile.
Ọganihu ngwa ngwa nke ekwentị na-egosi na ọ nwere ike ịbụ oge maka ikpo okwu emebere naanị maka iji ekwentị eji eme ihe. Ndụ na-agagharị ngwa ngwa karịa ka ọ dị afọ 30 gara aga na nke ahụ, apụla bụ ozi ịntanetị ogologo na ihe osise HTML mara mma nke na-enweghị nzube. Ndị mmadụ na-ahọrọ iji nkwurita okwu na-ekwukarị okwu, nke na-abụkarị nkata nkata. Ya mere, e-mail 2.0 ga-enwerịrị njikọ ndị ka mma; dị mkpụmkpụ, bịara n’oge ma hazie ka a gụọ ya na ekwentị mkpanaaka n’agbanyeghi ebe onye nnata nọ n’ụwa.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe na ndụ anyị, ntụaka a kapịrị ọnụ bụ faịlụ ndị ejikọtara na ozi-e ezigara anyị. Onye America na-emefu ihe dị ka nkeji isii kwa ụbọchị na-achọ mgbakwunye na faịlụ. Nke a pụtara ụbọchị atọ nke arụpụtaghị ihe kwa afọ. E-mail 2.0 ga-aghota ihe mgbakwunye anyị na-enweta ma jikwaa ya. Wepụta nke a n’ebe ahụ, bugharịa ya ebe a. Flag nke a maka ịkwụ ụgwọ wdg.
Tags: emailna adreesị emailadreesị emailemail imeweemail agagharị
Richard Smullen Thursday, October 8, 2015 Thursday, October 8, 2015
Richard Smullen bụ CEO nke Pypestream. O buru ụzọ jee ozi dịka onye nchoputa na onye isi nke Genesis Media LLC, ọgbọ na-esote ọtụtụ mgbasa ozi, ezigbo usoro mgbasa ozi vidiyo.
Etu ịlele ihe ịga nke ọma na Social Media
Onye ọ bụla Kpọrọ Mgbasa Ozi… Adgwọ Mgbasa Ozi A Na-akwụ …gwọ Ọrụ